အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Linn Htet Ye Yint - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Linn Htet Ye Yint
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Linn Htet Ye Yint ![ပြင်ဆင်ရန်]
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၁၄:၁၃၊ ၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)
I like wikipedia.[ပြင်ဆင်ရန်]
thank wikipedia.From Myanmar. Linn Htet Ye Yint (ဆွေးနွေး) ၀၈:၁၄၊ ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)
Hillary Yip အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဤသည်မှာ သင် ပထမဆုံး ဖန်တီးသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါက သင်၏ ပထမဆုံး ဆောင်းပါးအား ရေးသားနည်း လမ်းညွှန်ကို ဖတ်ရှုပေးပါ။
Hillary Yip စာမျက်နှာအား ဝီကီပီးဒီးယားမှ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် အဆိုပြုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း A7 အရ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆောင်းပါးသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ချင်း၊ အဖွဲ့အစည်း (တီးဝိုင်းအဖွဲ့၊ ကလပ်၊ ကုမ္ပဏီ စသည်)၊ ဝက်ဘ်အကြောင်းအရာ၊ သို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ အကြောင်းအရာသည် ထင်ရှားကျော်ကြားခြင်း သို့မဟုတ် အရေးပါခြင်းကို လက်ခံနိုင်လောက်အောင် ပြသနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ဤသို့သော ဆောင်းပါးများသည် အချိန်မရွေး ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်အချက်များအား ထင်ရှားအရေးပါမှုအဖြစ် လက်ခံသည်ဆိုခြင်းအား ဖတ်ရှုပါ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ်ခံလိုက်ရသော အချက်အလက်များအား နောင်တွင် ကိုးကားရန် ပြန်လည်အလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲသူ (အက်ဒမင်)အား ဆက်သွယ်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၀၉၊ ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Linn_Htet_Ye_Yint&oldid=648817" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။